XIRIIRKA BULSHADA | ALC Ozaukee
29% dadka qaangaarka ah ee ku sugan Wisconsin iyo 4% dadka qaangaarka ah ee Ozaukee County waxay la halgamayaan wax qorista iyo xisaabta oo aan lahayn xirfadahaas sida awooda isticmaalka jadwalka baska ama xisaabinta wadarta foomka amar. Shakhsiyaadka la halgamaya suugaanta, ALC waa safka hore ee helitaanka iyo xajinta qoyska joogtaynta shaqada iyo la shaqeynta beeshooda. Macallimiinteena ayaa ku caawiya ardayda inay horumar sameeyaan:
Akhris / qoris hoose ayaa had iyo jeer macnaheedu yahay inay ku nool yihiin saboolnimo: 7% dadka deggan Degmadda Ozaukee waxay ku nool yihiin ama ka hooseeyaan heerka saboolnimada. 20% kale ayaa ku dhaca qaybta loo yaqaan ALICE. Eraygan kooban macnihiisu waa: Hantida xaddidan, Dakhliga ku xaddidan, Shaqaalaynaya. In kasta oo ay shaqaynayaan mushaharkooda kuma filna. Xirfadaha akhriska iyo xisaabta oo ka fiican waxay dadka siiyaan fursad fiican oo ay ku helaan shaqaaleynta, dalacsiinta, iyo kasbashada dakhliga sare.
CAAFIMAADKA IYO NOLOSHA QOYSKA
Waalid leh xirfado wax akhris-qoris oo hoose ayaa u badan inay lahaadaan ilmo leh buundooyin liita, arrimaha dhaqanka, oo aakhirka laga yaabo inuu ka baxo. Carruurta ka soo jeeda qoysaska heerarkoodu hooseeyo ee waxbarashadu waxay toban jeer u badan tahay inay lahaadaan xirfado akhris-qoris oo hooseeya marka loo eego kuwa dhiggooda ah ee ka soo jeeda qoysaska aqoonta sare leh. Daraasadaha ayaa muujiyay in heerka akhriska ee hooyadu uu saameyn toos ah ku leeyahay guusha waxbarasho ee carruurteeda. Intaas waxaa sii dheer akhris-qorista sare waxay u oggolaaneysaa waalidku inuu u doodo cunugooda macallinkooda, takhtarkiisa ama xaalado kale oo macquul ah.
Kobcinta dhaqaalaha iyo kobcinta dhaqaalaha
Hagaajinta xirfadaha aqriska iyo qorista ee shaqaalaha waxay saameyn wanaagsan ku yeeshaan ganacsatada Gobolka Ozaukee. Shaqaalaha leh xirfadaha akhriska iyo xisaabta ee adag waxay ka caawinayaan meheradda inay noqoto mid hufan oo waxtar leh. Maalgelinta akhriska / qorista ayaa sidoo kale badbaadinaysa lacagta bulshada. Sida ku xusan Isbahaysiga Qaranka ee Waxqorista iyo hagaajinta xirfadaha waxbarashada aasaasiga ah ee dadka waaweyn waxay badbaadin kartaa $ 200 bilyan oo loogu talagalay barnaamijyada taageerada dowladda. Sidaa darteed, kor u qaadista xirfadaha waxbarashada aasaasiga ah ee dadka waaweyn waxay ku yeelanaysaa saameyn wanaagsan dhammaanteen. Shaqo wanaagsan oo aqoon leh macnaheedu waa koror ku yimaada hufnaanta goobta shaqada, dakhliyada sare, qoysaska kuwa aad u madaxbannaan iyo carruurta leh mustaqbal ifaya. Tacliinta Aqoonta ee Akhriska Dadka Waaweyn waxay caawisaa qoysaska waxayna dhistaa bulshooyinka deggan deggan.
Luuqada la wadaago waxay kor u qaadeysaa fursado badan oo dheeri ah oo ku saabsan is dhexgalka bulshada iyo isweydaarsiga dhaqanka, sidoo kale waxay kor u qaadeysaa ka qeybgalka bulshada iyo is fahan wanaagsan oo dhexmara xubnaha bulshada. Maanta, 7% dadka deggan Ozaukee County waxay ku hadlaan luqad aan ahayn Ingiriisiga gurigooda.